Ministry of Labor and Social Affairs – Somali Government – wasaaradda Shaqada iyo arrimaha Bulshada iyo wasaaradda Haweenka iyo Xuquuqul Insaanka oo Ka Wada Hadlay xuquuqda Caruurta Soomaaliyeed.
wasaaradda Shaqada iyo arrimaha Bulshada iyo wasaaradda Haweenka iyo Xuquuqul Insaanka oo Ka Wada Hadlay xuquuqda Caruurta Soomaaliyeed.
Wasiirka Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada H.E. Saalax Axmed Jaamac ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay wasiirada wasaaradda Haweenka iyo xuquuqul Insaanka marwo Deeqa Yaasiin oo hogaamineysay qaar ka tisan masuuliyinta wasaaradaas, sida madaxa CRC Cabdishakuur Xabiib Hayir oo u qaabilsan Arrimaha xuquuqda caruurta ee wasaaradda Haweenka iyo xuquuqul insaanka.
wasiirka Shaqada iyo wasiirka Haweenka ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka iyo wada shaqeynta ka dhaxeeya labada wasaaradood iyo sidii kor loogu qaadi lahaa qaabka loo wajahayo Arrimaha xuquuqda aadamaha gaar ahaan xuquuqda caruurta la shaqaalaysiinayo. Sidoo kale, xubnaha Agaasimayaasha iyo lataliyeyaasha wasaarada shaqada ayaa iyagana su’aalo iyo talooyin ku soo biiriyay kulanka wasiirada.
Labada wasiir ayaa isla gartay qorshe lagu sameynayo sharuucda iyo siyaasadaha (Policy) looga hortagayo ku shaqeysiga Caruurta Soomaaliyeed oo ay ku midaysan yihiin labada wasaaradood sida uu soo jeediyay wasaaradda Shaqada iyo arrimaha Bulshada
wasiir Saalax Ahmed Jamac ayaa sheegay in wasaaridiisu ay ku bixinayso dadaal dheeri ah sidii looga miro dhalin lahaa qorshayaasha ku aaddan xoojinta iskaashiga sharciga xuquuqda caruurta iyo siyaasada looga hor tagi karo ku shaqeysiga Caruurta.
Deeqa Yaasiin, wasiirka haweenka iyo xuquuqda aadanaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa xustay in geedi socodkan wada shaqenyta labada wasaaradood waxay tiri “waan soo dhaweynayaa in ay wada shaqeeyaan dhammaan mas’uuliyiinta labada wasaarad, caalamkana waxuu naga sugayaa warbixin maadaama aan soo saxiixnay heshiiska caalamiga ee caruurta, howshan inoo bilaabatay ayaa ahaan doonta mid daah furan oo laga wada qeybgalay”.
Ugu dambeyn wasiirada ayaa carabka ku dhufatay in ay ku dadaaleyaan sidii loo soo saari lahaa sharci iyo warbixin u qalan xuquuqda Caruurta Soomaaliyeed.